सलमान खानले रानूलाई मुम्बईमा ५५ लाखको घर पनि गिफ्ट गरेका छन् । भारतीय मिडियामा यो खबर छाए पनि यसको आधिकारिक जानकारी भने आएको छैन । – Nepal Insider
यी हुन् मुख्यमन्त्रीका बेहुली ! ‘मिस मंगोल’ ज्याङ्मुसँग लगनगाँठो कस्दै मुख्यमन्त्री राई
प्रमिलाले श्रीमानलाई मा’रेर भान्छामा गा’डिन्, त्यहीँमाथि चुलो बनाएर १ महिना खाना पकाइन्
पृथ्वीमा भइरहेको परिवर्तन पत्ता लाग्दा वैज्ञानिकहरु नै चकित !
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सलमान खानले रानूलाई मुम्बईमा ५५ लाखको घर पनि गिफ्ट गरेका छन् । भारतीय मिडियामा यो खबर छाए पनि यसको आधिकारिक जानकारी भने आएको छैन ।
सलमान खानले रानूलाई मुम्बईमा ५५ लाखको घर पनि गिफ्ट गरेका छन् । भारतीय मिडियामा यो खबर छाए पनि यसको आधिकारिक जानकारी भने आएको छैन ।
मुम्बई – भन्ने गरिन्छ नि, जब भाग्यले साथ दिन्छ, तब केही मिनेटमा नै कसैको दिन फर्किन सक्छ । भारतकी रानु मण्डललाई पनि त्यस्तै भएको छ । पूरै जिन्दगी रेल स्टेशनमा गरीबीमा गुजारेकी रानू मण्डलको जीवन यतिबेला फेरिएको छ ।
उनले भारतकी चर्चित गायिका लता मंगेश्करको एक गीत एक प्यारका नगमा है गाएकी थिइन् । यही गीतले उनको जीवनमा उज्यालो छाइदियो ।
रानूको उक्त गीतले दर्शकमा यस्तो जादु चलायो कि, सामाजिक सञ्जालमा उनको भिडियो ट्रेन्डिङमा आयो । उनलाई गायक हिमेशले गीत गाउने मौका दिए । अहिले खबर आएको छ कि, सलमान खानले ती बूढी महिलाको गीतबाट प्रभावित भएर आफ्नो आगामी फिल्म ‘दबंग ३’ मा मौका पनि दिने भएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, सलमान खानले रानूलाई मुम्बईमा ५५ लाखको घर पनि गिफ्ट गरेका छन् । भारतीय मिडियामा यो खबर छाए पनि यसको आधिकारिक जानकारी भने आएको छैन ।
हिमेशले पनि रानूको गायनबाट प्रभावित भएर एउटा गीत गाएका थिए । हिमेशले रानूसँग गीत गाउँदै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका थिए । उक्त भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।
रानूले सन् १९७२ मा रिलिज भएको फिल्म ‘शोर’ को गीत ‘एक प्यारका नगमा है’ गाएकी थिइन् । उक्त गीत गाएपछि एकाएक भाइरल बनिन् । उनको तुलना लता मंगेशकरसँग हुन थाल्यो ।
यसअघि रानू सोनी टिभीको एक रियालिटी शोमा पनि विशेष अतिथि बनेर पुगेकी थिइन् । रानू मुस्कुराउँदै भन्छिन्, ‘म रेल्वे स्टेशनमा यसकारण गाउँथे कि, मसँग बस्नका लागि घर थिएन, गीत गाएरै मैले आफ्नो पेट पाल्थेँ, कसैले बिस्कुट दिन्थ्यो, कसैले पैसा ।’
अहिले भने उनको जीवन फेरिएको छ ।
शालिकराम प्रकरण : श्रीमतीलाई छलेर ‘गर्लफ्रेन्ड’ का लागि छुट्टै कोठा भाडामा लिएका थिए
त्रिविको परीक्षा भदौ ७ गतेबाट सुचारु हुने
एकाबिहानै थप १८ जनामा कोरोना, गोरखामा १० संक्रमित
विवाहको लागि डोली ठिक्क थियो तर १६ वर्षकी किशोरीको ला’स उठ्यो
कोरोना जितेकाहरु भन्छन् : कोरोना लागेको कुनै महशुस नै भएन्
25 seconds अघि